Tsy dia lavitra ny toerana malaza any Anapa (11 kilaometatra monja) eo akaikin'ny Ranomasina Mainty eo amin'ny moron-Tanànan'i Vitiazievsky, tanàna kely iray nefa tena tia mandray vahiny i Vityazevo. Ao amin'io tanàna io dia misy mponina maherin'ny 7.000 eo an-toerana, ny ankamaroan'izy ireo dia manana ny fototry ny Greeks Pontiana. Ny anaran'ny tanàna dia nomena ho fanomezam-boninahitra ilay mahery fo tamin'ny ady Rosiana-Tiorka tamin'ny 1806-1812 nataon'ny Major Vityaz. Rehefa nandeha ny fotoana, nanjary toeram-ponenana malaza iray ny Ranomasina Mainty, faly ireo mpizaha tany fa mandany andro fialan-tsasatra avy any amin'ny firenena. Fa ankoatra ny fialantsasatra amin'ny torimasom-pahasambarana, ireo vahiny ao an-tanàna dia atolotra mba hijery toerana mahaliana. Manolotra ny fandraisana anjara amin'ny fitsidihana virtoaly kely izahay ary hahalalanay izay mendrika ao amin'ny Vityazevo.
Embassy "Paralia" ao Vityazevo
Ny toerana fialantsasatry ny fialan-tsasatra ho an'ny "olona Aborigène" sy ny mpitsidika dia ny dantelina tsara tarehy "Paralia". Manomboka amin'ny afovoan-tanàna, any avaratr'i Southern Avenue, ary manomboka amin'ny 1 km. Ny anaran'ilay fanintelony dia avy amin'ny teny grika paraly, izay midika mazava tsara fa ny dikany. Eto, toy ny hoe miditra ao amin'ny tanàna grika iray ianao, satria matetika no voaravaka endrika ny endriky ny tranom-borona fahiny - ny kolontsaina tsara tarehy, ny sarivongana, ny loharano, ny tranobe misy tsanganana.
Ity misy baza mahaliana, izay ahafahanao mividy fahatsiarovana miavaka amin'ny tenanao, firavaka, trinkets. Ny trano fisakafoanana kely, bars ary cafés dia miparitaka eto, izay ahafahanao manandrana sakafo matsiro sakafo maoderina grika, italiana ary rosiana. Tsy lavitra ny tranom-pasika ny "Pontic Park". Ao Vityazevo dia tsara tarehy antsoina hoe trano fonenan'ny trano elitika, izay toerana itiavany farihy tsara tarehy.
Lunopark "Byzance" ao Vityazevo
Ny iray amin'ireo toerana tena liana indrindra dia Vitiazevo, ilay kianja "Byzantium", miakatra eny ankavia amin'ny moron-drano "Paralia".
Vao haingana no nanorenana ilay toerana fialamboly, ka noho izany dia fitaovana vaovao ihany no hita ao amin'ny faritaniny: trampolines, kodiarana Ferris, carousels ho an'ny ankizy, horonan-tsary mpilalao, "Maxi-Fuga". Na dia izany aza, ny toetrany manintona indrindra dia ity no hany fanintelony any Rosia "The Minotaur Labyrinth".
Aquapark Olimpia ao Vityazevo
Hanohy ny fialantsasatra sy ny fialan-tsasatra dia mety ho ao amin'ny valan-drano ao an-toerana, voaravaka amin'ny fomba grika mitovy. Ny ankizy madinika dia liana amin'ny tanàn-dehibe mampiavaka ny rano amin'ny ririnina, playgrounds and slides.
Ampirisihina ny olon-dehibe mba hihomehezana amin'ny lozam-pandrosoana, ny sary mihintsy ary ny spaonjy. Eny, ireo mpankafy ny fara-tampony dia afaka mamantatra ny voay amin'ny havoana amin'ny fiandohan-tsokosoko, izay hahatratra 12 metatra isan-tsegondra ny haingam-pandeha.
Ny Fiangonan'i St. George, ilay nandresy tao Vityazevo
Ny fampiroboroboana fanatanjahan-tena dia mila manova amin'ny lalan-kely, manitatra ny faravodilanitra. Tsidiho ny tsara tarehy amin'ny fahatsorany, ny fiangonan'i Md George ilay nandresy tamin'ny kanto volamena, naorina tamin'ny taona 1994. Ambonin'ny fidirana amin'ny fiangonana dia sary famantarana an'i Md George ilay nandresy tamin'ny teknôlôjian'ny mosaika.
Dobrodey's Park ao Vityazevo
Indrisy, tsy misy tranombakoka ao Vityazevo. Saingy any amin'ny manodidina azy dia misy Park tsy dia mahazatra any "Dobrodeya", izay mampiditra ny fiainana sy ny kolontsaina ao amin'ny Cossacks Kuban.
Fambolena crocodile ao Vitiazevo
Mba hahitana andian-jiolahim-boto mampidi-doza ao Afrikana - mpihaza sy voay - dia azo atao any amin'ny toeram-pambolena Crocodile. Ireo biby miafina amin'ny haben'izy ireo samihafa dia voarakitra ao anaty fehezam-bato lehibe. Ireo mpitsidika dia afaka mahita ny voay avy amin'ny gera ary mamelona azy ireo mihitsy aza.
Ny fivarotana vintana ao Vityazevo
Ny Vitosyzevo ao an-toerana dia manasa ny vahiny ao an-tanàna handray anjara amin'ny fitsangantsanganana any amin'ny atrikasa sy ny trano fonenany. Manolotra ihany koa izy ireo handray anjara amin'ny famafazana divay samihafa amin'ny divay ary mividy hosotroina.
Toeram-piasana Botanika, Minsk
Toby tsy mety ritra raha tsy misy pump
Aiza no tsara kokoa ny miala sasatra any Ejipta?
Kakazo tsy mety rendrika
Toerana mahafinaritra any Okraina
Inona no kiraro mety amin'ny fitetezana rano?
Fitsipika momba ny fitondrana ranon-javatra eny amin'ny fiaramanidina
Fonosana fanorenana - ahoana no ahafahana mahazo endrika maoderina?
Gel-lubricant - inona ity?
Nilaza i Dakota Johnson mikasika ny fitifirana sarotra ao amin'ny horonantsary "Suspiria"
Akanjo lava - miaraka amin'ny akanjo sy ny fomba hamoronana ny endrika sarobidy indrindra
Fampiofanana ny kilasy fahadimy
Vehivavy miloko fotsy
Jerusalem artichoke amin'ny diabeta mellitus
Rota avy amin'ny teny amoron-dranomasina
Ny fomba famokarana ravina amin'ny taratasy amin'ny tananao manokana - kilasy maoderina mitaona
I Kate Middleton dia manindry mafy ny fahaterahany: maninona no ilain-dahy io?
Ahoana no fiovana ny lehilahy iray?
Ny efitrano fandriam-pahafin-trano - layout and zoning features
Mamoakan-tsofina miala amin'ny taonany
Bacillus intestinal - fitsaboana
Tavoahangy misy akoho - ireo sakafo matsiro mahavelona indrindra amin'ny tranokala tsy voasesika ao an-trano
Taylor Swift sy Tom Hiddleston dia manana tantara
Cowberry - tsara sy ratsy